Ọ nwere ike nwee nchekwube nke episodic na ịsụgharị okwu ga - ekwu na ọ ga - agbada? - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » dementias » Ọ nwere ike bụrụ na nchekasị nke episodic na ịsụgharị okwu ga-ekwu na ọ ga-akwụsị ojuju?
Dementia, n'ụdị ya dị iche iche, na-eburu ibu dị ukwuu na nde mmadụ 50 ahụ metụtara n'ụwa niile, yana nke ha ndị nlekọta.
A na-ele ọkwa ụfọdụ nke ọgụgụ isi anya dị ka akụkụ nke ịka nká. N'aka nke ọzọ, Dementia na-eme ka mbelata nke a "steeper", jiri nwayọ na-emebi ebe nchekwa, iche echiche, nghazi, ịgbakọ na mmụta, nghọta na ikpe .
Ihe ịma aka mgbe niile abụghị naanị ịchọta nhọrọ ọgwụgwọ dị mma ma dị mma kamakwa ịchọpụta ezigbo njirimara ndị na-enye anyị ohere ịkọ ụdị adịghị ike mmadụ ga-etolite na ndụ ha.
Ọmụmụ nke Gustavson na ndị ọrụ ibe  chọrọ ịnwale nkà na ụfọdụ nnwale neuropsychological iji buo amụma na ọ ga-enwe mmekpa ahụ nro.MCI) n'ime ezigbo okenye. Ndị ode akwụkwọ lekwasịrị anya ebe nchekwa episodic na na ọmụmụ asụsụ dika ndi nwere ike ibu amụma, na mmekorita ya na ndiiche mgbanwe abuo a.
Akụkụ na-adọrọ mmasị nke nyocha ha bụ nhọrọ nke ụfọdụ ndị mmadụ ịkọ banyere: ejima ahọpụtara n'etiti ndị ikom jere ozi agha n'etiti 1965 na 1975 (afọ 51 ruo 59).
Ejiri nnwale Neuropsychological mee ka nchekasị nke episodic na ọnụ na-ekwu okwu, yana ọnọdụ ọgụgụ isi, na mmalite nke ọmụmụ ma mgbe afọ 6 gasịrị. Naanị ndị mmadụ nwere ọgụgụ isi dị larịị na nyocha nke mbụ ka ahọrọ ka ha sonyere n'ọmụmụ ihe ahụ.
Ka afọ isii gachara, n’ime ndị otu 6, mmadụ asatọ mepụtara ụdị MCI (ihe dị ka ọkara nke ụdị ahụ) amnesic); nke ikpeazụ putara ihe dị iche na ndị ọgbọ ha naanị n'otu ihe: ha tọrọ ha karịa ka ndị maara maka ọdịmma ha.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Profaịlụ nke ọgụgụ isi na WISC-IV na nsogbu mmụta mmụta akọwapụtara
Mgbe enyocha mgbanwe dị iche iche nwere mmasị n'ọmụmụ ihe a, ndị ode akwụkwọ ahụ chọpụtara na akara ngosi dị ala na ntughari edemede na mbido episodic buru amụma banyere mmalite nke ọmụmụ ahụ. Karịsịa, ebe nchekwa episodic yiri ka ọ na-ebu amụma ọganihu na MCI amnesic, ọ bụ ezie na ọmụmụ asụsụ were were ọnọdụ na-enweghị nlele.
Ọzọkwa, ncheta episodic, mana ọ bụchaghị ọgụgụ asụsụ, dịkwa ka ọ na-ebu amụma maka MCI na-abụghị amnesic, si na-atụ aro na ọ nwere ike ịbụ ụdị ịkpọte maka izugbe ọgụgụ isi iju kama ịbụ naanị n'akụkụ metụtara ebe nchekwa.
Nchọpụta ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na usoro ọmụmụ ihe na ikike iche echiche yiri mmekọrịta dị na ya mana ihe nchọpụta a, dị ka ndị dere akwụkwọ si kwuo, nwere ike inweta site na mkpụrụ ndụ ihe nketa ebe ọ bụ na arụmọrụ ule abụọ ahụ dịgasị iche na ụzọ ejima ejikọtara ọnụ.
Ndị ode akwụkwọ kwubiri na ekwesịrị iji ebe nchekwa na ịkọwa okwu ọmụmụ dị ka ndị na-egosi ọghọm maka mbelata ọgụgụ isi na ndị nkịtị. Ọ bụ ezie na mkpa nke akara Ihe omumu banyere ihe omuma (dika ihe PET) achotaghi, data gosiputara na nnwale nke neuropsychological na egosiputa mgbe odi nma na ndi buru uzo ga - adi iju ya na oganihu ya na Alzheimer's dementia.
Gustavson na ndị ọrụ ibe ya kwenyere na ụzọ dị mma ga-esi jikọta ozi sitere na ihe nrịbama nke ihe omuma banyere ịkọ nkọ na ule ebe nchekwa iji buo amụma ọgụgụ ga-agbada na ndị mmadụ.
Ọzụzụ iche echiche na MCI: ụzọ atọ ejiri kọmputa
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Oru mmuta a na-emetụta ọkwa ọgụgụ isi?
Dementia (nke ikpeazụ emere na 12 Ọgọst 2020)
Gustasvon, DE, Elman, JA, Panizzon, MS, Franz, CE, Zuber, J., Sanderson-Cimino, M.,… & Toomey, R. (2020). Njikọ nke ịkpa ike nghọta na agamnihu na ndị okenye. Nchọpụta ihe.
Alzheimer, cognitive iju, mgbaka, okwu ọnụ, ebe nchekwa episodic
Ọ nwere ike bụrụ na nchekasị nke episodic na ịsụgharị okwu ga-ekwu na ọ ga-akwụsị ojuju?2020-08-212020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/puzzle-1261138_960_720.jpg200px200px